Dowladda Itoobiya oo xirtay safaarad ay ku laheyd dal muhiim ah.
Thursday September 02, 2021 - 19:35:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xilli dhaqaala darro ballaaran ay wajahayso dowladda Xabashida Itoobiya ayay soo koobmayaan safaaradihii ay ku laheyd dalka Dibaddiisa.
War rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Addis Ababa ayaa lagu sheegay in albaabada loo laabay safaaraddii Itoobiya ee wadanka Al Jazaa'ir islamarkaana lakala diray dhammaan shaqaalihii iyo diblumaasiyiinti.
Dalka Al Jazaa'ir oo ah wadanka labaad ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika ayaa saameyn weyn ku dhax leh Ururka Midowga Afrika iyo qaaradda inteeda kale, dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa tallaabada ay Itoobiya qaadday u arkay guuldarro weyn oo dhanka diblumaasiyadda ah.
R/wasaare Abiy Axmed ayaa horay usheegay in ay xirayaan illaa 31 safaaradood oo ay dibadda ku leeyihiin sababa laxiriira hoos udhaca dhaqaale ee dowladdiisa ku habsaday.
Dagaalka ka holcaya gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya ayaa sababay in dalku uu burbur qarka ufuulo waxayna xukuumadda Abiy Axmed cadaadisyo dhaqaale iyo mid diblumaasiyadeed oo xooggan kala kulmaysaa dowladaha reergalneedka kuwaas oo kaalin weyn ku lahaa taageera siinta Itoobiya.
Al Qaacidda oo Muslimiinta caalamka ugu baaqday in ay dagaal jihaad ah ku qaadaan dowladda Hindiya.